FANAIRANA (VOAHARY GASY) - Madagascar Informations
Aza manararaopaty ny fotoampifidianana handrobana ny zavaboahary Malagasy !
Mankasitraka ny fitondrampanjakàna ny Alliance Voahary Gasy (AVG) amin’ireo ezaka efa nataony sy ny fahavononana amin’ny fiaraha-miasa amin’ny firaisamonimpirenena ho famongorana ireo mpanimba sy mpanondrana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary eto Madagasikara. Ohatra amin’izany ny fahatratrarana ireo sokatra aman’alina tany Atsimo Andrefana sy ny fanenjehana sy ny fanakanana ilay sambo saika hanondrana andramena tany Avaratra Atsinanana.
Tato anatin’ny volana vitsivitsy izay fotoam-pifidianana koa anefa dia hita soritra fa mihabe ary mihoapapana mihitsy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harenam-pirenena. Ao ny firohotana amin’ny tany, ny fitrandrahana manararaotra sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary eto Madagasikara ataon’ireo sokajin’olona sy mpandraharaha ary mpanao politika sasany tsy mataho-tody. Toa tsy misy fanakanana hita soritra izy ireny avy amin’ny tompon’andraikipanjakàna any antoerana, izay tokony hahafehy ny zava-mitranga rehetra eny ifotony. Matetika koa dia miteraka disadisa ara-tsosialy, tsy hafaliana, alahelo sy lonilony eny amin’ny fiaraha-monina izay tsy afa-manoatra toy ny valala voatango ireny.
Ohatra amin’izany ny :
– Fandripahana ala sy fanaovana saribao tsy ara-dalàna any Tsaramandroso manakaiky ny Valan-javaboaharimpirenena ao Ankarafantsika (Boeny)
– Fanaovana hatsake hambolena katsaka sy voanjo sy fitrandrahana hazo sarobidy ao anatin’ny Tahirinjavaboarin’i Menabe Antimena sy ny Allée des Baobabs ao Morondava ka maharipaka efa ho 50 Ha isan’andro izao
– Fandoroana ny Parc National Ranomafana (Ambatovaky, Sahavondronina), ka araraotin’ireo mpitrandraka lehibe hanapahana hazo sarobidy sy anaovana saribao izay aondrana amin’ny faritra maro eto Madagasikara
– Fitrandrahana tsy mitsahatra ny safira ao Beampy (Didy), anatin’ny Faritra voaaro CAZ any Ambatondrazaka
– Fitrandrahana vato sarobidy sy fanaovana saribao tsy ara-dalàna ao amin’ny alan’i Maromizaha (Andasibe)
Koa manao antso izahay ho an’ireo sehatra tsy miankina, indrindra fa ny tera-tany sy ireo izay nomen’ity firenena ity tombontsoa hatanjaka ara-toekarena, na vahiny aza. Aoka ianareo tsy handray ny vokatr’ireo fandripahana ireo fa tsy soa toavin’ny orinasa ara-dalàna « mendrika » sy mandala ny lovainjafy izany (RSE= Responsabilité Sociétale des Entreprises) ; fa kosa miendrika famotsiambola tsotra izao ary fahotàna mahafaty hamono sy hanimba ny taranak’ity firenena Malagasy ity.
Averina eto indray fa olona sy firenena mahalàla menatra ny Malagasy, ka tokony hiova famindra avokoa raha mbola manana hambo, na kely ihany aza, hanova ny laza ratsy maro ; ary isan’izany ny hifosàna an’i Madagasikara ho tompondaka erantany teo amin’ny fandripahana ny ala tamin’ny taona 2017 satria 517.000 Ha no indray rava tamin’izany (Loharanombaovao: Global Forest Watch). Ahiana hampitombo hatrany ny fatiantoka ara-tontolo iainana izay efa latsaka lalina izany tranga izany (Fiovan’ny toetrandro hitamaso, faharitan’ny rano, hamafin’ny loza voajanahary, fihenan’ny fivelomana avy amin’ny fizahantany, sns…), ka hahafoana ny ezaka ataon’ny Mpiaro ny harena voajanahary sy ireo vondron’olona ifotony.
Na inona na inona fotoana lalovan’ny firenena dia tsy tokony handeferana mihitsy ny maha « tany tan-dalàna » an’i Madagasikara. Tsy hananankavana ny marina, tsy ankijery loko pôlitika na firaisantarika na foko na antokompinoana. Iankinan’ny ho avin’ny firenena tanteraka ny fitandroana ny tontolo iainana sy ny zavaboahary satria antoky ny fampandrosoana maharitra ary antoka hiarovana ny mahahafakely ity nosy malalantsika ity.
Eto am-pamaranana dia mampahery ny tompon’andraiki-panjakana mijoro amin’ny marina sy ny Ministera voakasika rehetra ny AVG hanohy ny ezaka tsara efa vitany sy ny niaraha-nanao ; mba tsy hihemotra fa hanome hasina ny « Fanjakàna » amin’ny asany manerana ny lafintany rehetra eto Madagasikara amin’izao vanim-potoana izao.
Manaitra ihany koa anefa mba tsy ho variana na ho voasembatsembana noho ny raharaha politika sy fifidianana ; fa mba ho « sahy » handray andraikitra sy hampihatra ny lalàna manankery, ka hiroso amin’ny fanasaziana ny mpanao ratsy sy hanery ny famerenana amin’ny laoniny ny Harena voajanahary norobaina amin’ny fampiasana ny « fahefam-panjakana ». Ny AVG, ny firaisamonimpirenena miray dia aminy sy ny tambazotran’ny tsara rehetra ifandraisany dia vonona ny hanome tànana hatrany amin’ny famongorana haingana sy maharitra ny ezaka ho tarihinareo.
Firenena iombonantsika rehetra ity, na Fanjakàna, na mpanao pôlitika na firaisamonimpirenena na sehatra tsy miankina ; koa izany no andraisana izao andraikitra izao ; ho an’ny taranaka Malagasy.
Antananarivo faha-27 Novambra 2018
Amin’ny anaran’ny Alliance VOAHARY GASY
← 44 blocs de pétrol et gaz
Programme : lutte contre l’insécurité (MIdi madagasikara) →
25 candidats pour la révision de la liste électorale
29 octobre 2018 Madagascar Informations 0
TOAMASINA FAHAROA TSY MANAIKY NY HIBODON’OLO TOKANA NY TANY MIREFY 148 HIKITARA NY FIKAMBANANA FAGNANKO
23 octobre 2016 Rajoelinirina Roimemy Commentaires fermés sur TOAMASINA FAHAROA TSY MANAIKY NY HIBODON’OLO TOKANA NY TANY MIREFY 148 HIKITARA NY FIKAMBANANA FAGNANKO
Mila harovana ny Tontolo iainana